Ahoana ny fomba hidirana amin'ilay safidy "horonan-tsary tiako" amin'ny YouTube? ▷ ➡️ mpanaraka ▷ ➡️
Enga anie 12, 2021 0 fanehoan-kevitra 755
Ny sehatra YouTube dia mampiditra a safidy ahafahantsika mijery ny lisitr'ireo horonan-tsary rehetra izay "tianay". Raha te hiditra amin'ity lisitra ity dia mila tsindrio fotsiny ilay bokotra "Video izay tiako" eo amin'ny menio lehibe.
Fa raha tsy hainao ny fidirana amin'io safidy io Manasa anao izahay hamaky ity lahatsoratra manaraka ity izay hasehonay anao ny dingana tsirairay izay tokony harahinao mba hahitana ny lisitry ny horonan-tsary tianao ao amin'ny kaontinao YouTube.
Dingana hidirana amin'ilay safidy "Lahatsary tiako"
Ireo mpampiasa ny sehatra YouTube dia afaka mampiditra ny lisitry ny horonantsary izay tiako be avy amin'ny kinova desktop na koa amin'ny fampiharana ho an'ny finday. Amin'ireo tranga roa ireo dia tsotra sy haingana ny fomba fanao.
Fomba 1: Avy amin'ny kinova desktop
Te hahafantatra izay horonan-tsary "ankafizinao" tao amin'ny YouTube ve ianao? Azonao atao amin'ny fomba mora be avy amin'ny kinova desktop amin'ity sehatra video streaming malaza ity.
Ny zavatra voalohany tokony hataontsika dia midira amin'ny sehatra YouTube avy amin'ny solosainantsika. Mila manokatra ny navigateur fotsiny ianao ary manoratra ity adiresy web manaraka ity www.youtube.com
Vantany vao tafiditra ao amin'ny lampihazo isika midira amin'ny mailaka sy teny miafinay. Izao dia tsindrio ny tsipika telo mitsivalana izay miseho eo amin'ny ilany havia ambony amin'ny efijery ary tsindrio ny safidy "Library"
Eo amin'ny faran'ny pejy dia hahita fizarana misy lohanteny ianao "Lahatsary tiako”. Ao, lisitra feno iray no hiseho miaraka amin'ireo horonan-tsary izay efa "tianao" ao anatin'ny lampihazo. Raha te hiditra amin'ny lisitra feno dia mila tsindrio fotsiny ny "See All".
Kitiho ny "Video tiako"
Misy fomba mora kokoa sy mivantana kokoa hiditra amin'ny lisitry ny horonantsary izay tiako ao anatin'ny Youtube. Eto izahay no manazava izany aminao:
tsindrio ambonin'ireo dian-kapoka telo (zoro ambony havia)
Tsindrio ny safidy "Lahatsary tiako"
vonona. Hiditra amin'ny lisitry ny horonan-tsary tianao rehetra ao anaty lampihazo ianao.
Fomba 2: Avy amin'ny rindranasa finday
Ireo mpampiasa izay miditra matetika amin'ny YouTube avy amin'ny rindranasa finday dia afaka miditra amin'ny lisitry ny horonan-tsary izay nankafizina tao anatin'ny sehatra ihany koa. Ireto ny dingana tokony harahina:
Voalohany indrindra dia mila sokafy ny fampiharana Youtube amin'ny findainao. Raha tsy misy fivoriana misokatra dia lazao fotsiny ny mailaka sy ny teny miafinao.
Ao amin'ny zoro ambany ankavanan'ny efijery dia hahita safidy misy ny anarana hoe "Biblioteca”. Mila tsindrio ianao eo raha te hahita ny lisitry ny horonan-tsary sy ny lisitry ny lisitry ny lisitra farany.
Etsy ambany no hahitanao ny safidy "Lahatsary tiako”. Ny fikitihana azy io dia hanokatra pejy iray miaraka amin'ireo horonantsary YouTube tianao rehetra.
1 Dingana hidirana amin'ilay safidy "Lahatsary tiako"
2 Fomba 1: Avy amin'ny kinova desktop
3 Kitiho ny "Video tiako"
4 Fomba 2: Avy amin'ny rindranasa finday